Killer Akashandura Vanotambudzwa muBurger - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Killer Akashandura Vanotambudzwa muBurger
Killer Akashandura Vanotambudzwa muBurger
by Piper St. James October 27, 2019 5,158 maonero
Mutsiva mhondi Joe Metheny akatanga kutsamwa kwake kukuru apo mudzimai wake akatora mwana wavo ndokutiza kubva kumba kuBaltimore, Maryland. Iyi ndiyo yaive spark yakatanga zvese.
Pakasungwa Metheny muna2016 akareurura mhosva dzake, ndokupa mhosva yekuda kutsiva pamukadzi wake nemurume waakamusiira. Nekudaro, yaive iyi hasha yakagadzira uye ikadyisa chimwe chinhu chakadzika mukati make.
Nepo hasha dzakasimudzira basa rake, Metheny akasangana nevazhinji vakaurayiwa avo vakangozviwana vachidarika nzira yake muhupenyu. Sekubuda kwehasha nekutsamwa kwekusiiwa achangobva kusiiwa, murume aimbofara murume aida kuburitswa kwehasha dzake; uye chokubuditsa ichi kwaive kuponda, kubata chibharo, uye kugura nhengo.
Vazhinji veava varume nevakadzi avo vakazozviwana ivo vari munzvimbo isiri iyo panguva isiri iyo vaive vanodzungaira, vasina pekugara, uye pfambi. Vanhu hapana aizoona kuti vaenda kana kushaya.
Izvi zvinogona kunzwika zvakafanana nenyaya dzawakambonzwa munguva yakapfuura, asi chii chinopatsanura Metheny kubva kune wako "wakajairika" mhondi nzira yaakarasa nayo miviri yevasina fungidziro vanyajambwa.
Metheny akagura miviri yavo, ndokuunganidza nyama yavo nenyama, ndokuzvisanganisa muvhu yenguruve nemombe yaaigadzira hamburger. Aibva atengesa mabhamburger aya padivi pomugwagwa.
Mhondi yakati miviri yakanga iine kuravira kwakafanana kune yenguruve yepasi. Vakati "Ukazvisanganisa pamwe chete nenyama yepanyika hapana anoziva mutsauko." Muchokwadi, hapana kana mumwe mutengi, uye mutengi wemhosva dzake, akambonyunyuta nezve kuravira kwechikafu chavo.
Kana zviri zvezvikamu zvemitumbi izvo zvisina kukodzera hamburger mubatsiri, Metheny akaviga mumotikari.
Zvinoita sekunge mhosva dzake dzaive dzisisiri kutsiva kwakavakirwa. Panzvimbo iyoyo, apo furiza yaMetheny payakadzika yaizoenda kunotsvaga mumwe mweya wehurombo wechinhu chakakosha mumabhegi ake aakashandira vatengi vake. Akaonekwa aine kuravira chaiko kwekuuraya.
Panguva yaakasungwa aiti akauraya vanhu gumi. Akaudza vakuru vakuru "Chinhu choga chandinonzwa kushatirwa pamusoro pechimwe cheizvi ndechekuti handina kuzouraya vana mai vamai vangu vandakanga ndanyatsotevedzera, uye ndiye mukadzi wekare uye bastard yaakabatana nayo."
Metheny akapedza isingasviki makore gumi mutirongo mushure mekutambira mitongo yeupenyu husina parole yekuponda kwaKathy Spicer naCathy Ann Magaziner.
Muna 2017 akawanikwa akafa muchitokisi chake nemurindi wejeri. Aive nemakore makumi matanhatu nemaviri.